Ogaden News Agency (ONA) – Bayaan Ciidan oo JWXO ay ka soo saartey dagaaladii ugu dambeeyay iyo Itobiya oo beenintii looga bartay ka xishootay
Bayaan Ciidan oo JWXO ay ka soo saartey dagaaladii ugu dambeeyay iyo Itobiya oo beenintii looga bartay ka xishootay
Posted by ONA Admin	/ September 2, 2011
Waxay wakaaladaha wararka ee caalamka iyo idaacadaha caalamkaba si aad ah uga faaloodeen bayaankii Ciidan ee Jabahdda Wadaniga Xoreynta Ogadenya ay ka soo saartey shalay dagaaladii ay CWXO ku baabi’yeen guuto ciidanka Itobiya ah oo si wadajir ah dagaal uga soo qaaday Ba’bili, Jigjiga, Dhgaxmadow iyo Dhagaxbur. Waxay JWXO ku cadeysay bayaankeeda ciidan in ciidamo sooc ah oo RW dalka Itobiya KT Meles u gaar ah oo la galbinayay koox ka socota shirkadii Shiinaha ee shidaal badhista u socotay si aad ah loo jabiyay iyagoo inta la hubo laga dilay 25 askari iyo ugu yaraan 3ex gawaadhida Uuraalka ah oo la baab’iyay. Ciidanka cadawga ee sooca ah ayaa xedho ku meel gaadh ah oo loogu talagalay in laga ilaaliyo shirkadda shidaal badhista ka samaystay Qabribayax oo u dhexeysa Jigjiga iyo Dhagaxbuur.
Waxay jabhadda bayaankeeda ku sheegtay inay ciidamada cadawga dhibaato ku hayeen dadka deegaanka iyo beerahooda iyagoo beeralayda ku amray inay ka guuraan beerahooda iyagoo yidhi waxaa maray wadooyinka baadhitaanka (seismic lines). Waxaa kaloo ay ku sheegtay JWXO bayaanka in dad shacab ah lagu dhibaateeyay ay ka mid yihiin duqii dagmada Cobolle Xiis Maxamed Axmed iyo ku-xigeenkiisii Moxamed Cabdi Diriye iyo odayaal kale oo la jidh dilay oo mayd ahaan ay uga tageen.
Waxay JWXO bayaankeeda ku cadeysay inay dagaala kale oo rogaal celin ah oo cadawga uu soo qaaday cagta la mariyay, dagaaladaasoo ka kala dhacay agagaarka Galalshe, Malqaqa, Bodhley, Karinka Soolka between Degahmadow and Degahbur, Higlaley, Obole, Eel-weyne.
JWXO waxay caalamka u soo bandhigtay in shaqaalaha Shiinaha ah ay xidheen dharka ciidanka ee tuutaha loo yaqaano taasoo ka baxsan xeerka caalamiga ee Geneva Convention oo qeexaya in dadka madaniga ah ay ka soocnaadaan ciidanka saan loo dhibaateyn, sidaa darteed wixii soo gaadha ay iyaga ka masuul noqon doonaan.
Wakaaladaha wararka oo xidhiidh isdaba jog ah la sameeyay masuliyiin Itobiyaan ah waxay diideen inay bayaanka JWXO wax ka yidhaahdaan taasoo muujinaysa jabka soo gaadhay ciidamada gumaysiga.
Goobaha ay dagaalada ka dheceen ka fiiri khariidadan
السلاعليكم dhamaan umada somalida ogadenia waxaan salaamayaa shaqaalaha iyo maamulka shabakada (ONA) IYO DHamaan ciidamada qalabka sida ee xoraynta ogadenia ONLF guda iyo dibadba waxaana leeyahay عيد مبارك salaan kabid waxaan uhanbalyaynayaa shamaan ciidamada jwxo iyo shacabka reer ogadenia meel walba ayjoogaan guulihii ay ciidamada jwxo kasoo hoyiyeen gumaysigii doolka ahaa ee ay gacanta kulul kudhufteen waanuna kufaraxsanahay inshaa alaah waxaan rajaynayaa in in aan gabi ahaaanba ka roxowno umanaysiga madaw eenahaysta waxaana leeyahay GUUL GOBANNIMO XORNIMO انشاء الله الله اكبر
abu cabdiraxmaan says:
waxaan leeyhay ilaahay guusha ha siiyo cwxo ,, waa ciidan xaq u dirir ah oo dalkooda loogu yimid oo difaacaya sharafta umadda soomlaliyeed .. aniga waxaan ahay nin ree sheekh isaxaaq ah oo dalka la gumaysto daga, waanan ogahay in tolkay ay ka baxeen dagaalka oo qaarkoodna cadwga la jiro,, ilaahay ma cafin doono kuwaa iyo gabi ahaan somalida ku fiirsanya cadawga gaalka ah wiilasha onlf .. ilaahayow waad i aragtaa ee niyadayda ii raac.
walaalkiin abu cabdiraxmaan.
ALAHU AKUBAR AHU AKUBAR
guusha iyo nasriga waxaa iskalemujaahidiinta iyoumada s.ogadfenia wayanahunawaa uuguuri
ilahay ayaan talasaranay samira wan kudadalaynaa
Maan shaa allah ilaahay haydin guuleeyo
gumaysiga wayaanaha dhaqan xumida waa lagu yaqaaney, laakiin waxaa la yaab leh qaabka waalida ah ee ay u dhaqmayaan China, ama shiinaha, shayaadiinta indhaha yar-yar waa jabkoodii ay ku waano qaadan lahaayeen.
CWXO guulaysta, guusha iyaga ayaa leh insha allaah.
Dhaqane Maydhane says:
Viva Jwxo ALLOW Idin guulee oo cadawgiina jabi.